जी एन एस एस (GNSS) को पूर्ण रुप Globle Navigation Syatelilte System अर्थात ग्लोवल नेभिगेशन स्याटलाइट सिष्टम हो । स्याटलाइट (भू–उपग्रह) को उपयोग गरी विभिन्न विषय तथा क्षेत्रका सूचना संकलन गर्न सघाउ पुर्याउने प्रविधिलाई (GNSS)प्रविधि भनिन्छ । यसको प्रयोग विकसित देशले नक्साङ्कन ,प्राकृतिक प्रकोप ,सञ्चार ,कृषि ,पर्यटन ,हवाइ उड्यन लगायतका क्षेत्रमा प्रचुर उपयोग गरेका छन।
नेपालले यी क्षेत्र लगायत भूकम्पीय जोखिमको पूर्व जानकारी पाउन यो प्रविधिको उपयोग गर्न जरुरी छ । नेपालले नक्साङ्कनमा यो प्रविधि उपयोग गरिरहेको छ ।
1 बर्तमान राष्ट्रियगान
2 नेपालीले बनाएको क्यास अन एड प्रविधि
3 सगरमाथा हिरक महोत्सव
4 नेपालमा नागरिक चेतना/शिक्षाका प्रमुख समस्याहरु
5 के हो एटीए कार्नेट ?
6 के हो ओटिसी बजार ?
8 Career News and Info वैशाख ७, २०७४
9 विश्वकप इतिहास
10 List of Miss Nepal